Mutengi-Chekutanga E-Commerce: Smart Solutions yeiyo Imwe Chinhu Chausingakwanise Kuwana Kuti Usatadza | Martech Zone
Iyo denda-nguva pivot kune e-commerce yauya neakachinja vatengi tarisiro. Kamwe kukosha-kuwedzera, zvinopihwa pamhepo izvozvi zvave chekutanga chekubata mutengi kune akawanda mabhii ezvitoro. Uye sezvo fanera huru yekudyidzana kwevatengi, kukosha kweiyo chaiyo vatengi rutsigiro iri panguva yese yakakwira.
E-commerce vatengi vatengi vanouya nematambudziko matsva uye kumanikidza. Kutanga, vari-pamba vatengi vari kushandisa yakawanda nguva online vasati vaita kwavo kutenga zvisarudzo.
81% yevakapindura vakatsvaga zvigadzirwa zvavo pamhepo vasati vaita yavo sarudzo yekutenga. Iyo nhamba inomiririra kuwedzera kwakapetwa kanokwana kubva pa pre-denda avhareji e20% chete. Uye zvakare, chidzidzo ichi chakawana kuti vatengi ikozvino vanoshandisa avhareji yemazuva makumi manomwe neshanu vachiunganidza ruzivo pamhepo vasati vasarudza chigadzirwa kana kambani yezvavanofunga pakutenga.
Source: GE Guta
Munyika iri kuramba ichibatana uye inoda kuziva, ruzivo rwevatengi fanira ive yekutanga kambani. Kudzoka mu2017, zvine mutsindo 93% yevatengi vakati online ongororo dzakakonzera kwavo kushambadza sarudzo - iine nguva yakawanda pamaoko edu uye zvimwe zvekutengeserana zvichiitika pane edu masikirini, iyo nhamba yakangowedzera. Vatengesi havachakwanise kukanganisa ruzivo rwevatengi vepamhepo. Kuve nechokwadi chekubatana, kwakapindirana kusangana haisi nzira yekutengesa, inzira yekurarama. Uye zvave kunyanya kukosha mune iyo COVID-zera.
Pazasi pane mashoma eanogadzirwa eadhijitari nzira iyo mutengesi wese anoda.
Tekinoroji Yekumhanyisa Nani: Nekuti Nguva Ndiyo Zvese
Maitiro eInternet ndeomukati. Tingave tichishandiswa kumisikidza kumusoro kumahofisi makuru ezvitoro, asi hapana munhu anoda kumirira kutenderedza kutsigirwa chaiko. Izvi zvinopa chipingamupinyi chakasiyana kune e-commerce vatengesi, vasingakwanise 'kuvhara iwo chaiwo madhoo' kana wachi ichirova 7 pm.
Kuti ubvise nguva chaiyo yekumirira uye kubata iyi nyowani yakatenderedza-iyo-wachi kudiwa, vatengesi vari kutendeuka zvakanyanya kumatvbots emhinduro dzebasa revatengi. MaChatbots anoshandisa huchenjeri hwekunyepedzera kuita nemazvo nevatengi, kungave kuburikidza nemavara, webhu-peji kutumira mameseji, kana parunhare. Chiyero chekutora che chatbots chakazara mukati medenda, sevatengesi vakaona kuti otomatiki manejimendi manejimendi arikuderedza mashandiro avo ekushandisa. Chatbots inopa nzira dzakarongedzwa dzekutora mubhadharo, kugadzirisa odha kana kudzoka, uye kusevha vanotarisira vatengi-zvese pasina kurasikirwa neirova.
Nokuda kwechikonzero ichi, Bhizinesi Insider yazvino mushumo hazvifaniri kutishamisa. Vakafanotaura kuti mutengesi wevatengi anoshandisa kuburikidza chatbots pasirese anosvika $ 142 bhiriyoni mukati memakore matatu anotevera. Vakawana zvakare kuti ingangoita 40% yevashandisi veInternet chaizvo sarudza kusangana nematauriki pamusoro pemamwe masisitimu ekutsigira seanomiririra vamiririri.
Tech yeiyo Yakabatanidzwa Chiitiko: Iyo Nyowani Yevatengi Yakajairwa
E-commerce yakasarudzika mukuti inogona kuitika kubva chero kupi. Mabhiza haagone kuvimba nguva dzose kuti vatengi vakagara pamba pamberi pevazere-saizi monitors vane yavo webhusaiti kumusoro mune yakakwana kuratidzwa. Kazhinji, vatengi vari kutaurirana neye webhusaiti webhusaiti pane yavo mbozhanhare pakati pezuva nezuva-zuva zviitiko. Asi data rakaunganidzwa na Statista zvinoratidza kuti chete 12% yevatengi vanofunga yavo nhare yekutengesa ruzivo zviri nyore.
Iko kufamba chaiko kuri kuisa kumanikidza kutsva kune vatengesi kuti vavandudze ruzivo rwevatengi pane ese mabatiro evatengi, uye kana zvasvika kune nhare, pane basa riri pachena rinofanira kuitwa. Asi vatengesi vakaramba vachiisa mari yavo muCRM (vatengi hukama manejimendi manejimendi) vakazviwanira ivo vari munzvimbo iri nani yekugadzirisa iyi COVID-nguva yekuda. Akabatanidzwa CRM mapuratifomu anotendera vatengesi kubata kwavo kwevatengi ruzivo munzira dzese, kusanganisa yavo ye-mu-chitoro data nekutengesa kwavo pamhepo, kwavo chatbot kutaurirana, yavo yemagariro midhiya kubatanidzwa, uye yavo email email mushandirapamwe.
Izvi hazvisi izvo chete zvinopa mukana wekuvimbika wevatengi, mune yavo data inochengetedzwa yakachengeteka uye inogara ichidarika pane akawanda ekubata mabhatani, asi zvakare ine iyo yakawedzera bhenefiti yekuburitsa rese rakakosha dhata mune imwechete nzvimbo. Automated data kutenga pane zviitiko zvakawanda zvinogona kurongedzwa kuita chikuva chimwe. maodha anozadzwa nekukurumidza, kudzoka kunoitwa zvakanyanya, uye varidzi vane data rese ravanogona kukumbira kupa simba kushambadzira kwavo.
Tekinoroji Yekutengesa Yakanangwa: Zvatinoziva Izvo Kusvika Parizvino
Nehuwandu hwakawanda hwekushambadzira mukati, vashambadzi veadhijitari vari kuyedza munzira dzakasiyana dzakasiyana. Pakati pemaitiro ekukunda kusvika parizvino kwave kugamuchirwa kwechokwadi chakawedzerwa. Kuwedzera kwechokwadi (AR) kunogadzirisa dambudziko rakakura re COVID-era: ndinovimba sei chigadzirwa kana ndikatadza kuchiona muchitoro? Nekukurumidza, zvikwata zvekutengesa zvine hungwaru zvakawana mhinduro. Zviitiko zveAR zvinogona kutevedzera kutaridzika kwemidziyo yekutandarira, saizi yepanti pane yakatarwa furemu, mumvuri wemiromo pameso pevatengi.
AR iri kutora fungidziro kunze kwekutenga pamhepo, uye iri kutove ichipa vatengesi kudzoka kunoshamisa; vatengesi vane kudyidzana, 3D zvigadzirwa zvinoratidzira vakashuma 40% yakakwira kutendeuka mwero. Kugadzira kubheja kwakachengeteka uko vatengesi vasingazoda kugoverana nekutengesa kwavo kwepamusoro chero nguva munguva pfupi, Statista akafungidzira kuti iyo chaiyo yakawedzera musika inosvika 2.4 mabhiriyoni evashandisi na2024.
Chekupedzisira, akangwara ekushambadzira zvikwata ari kutsamira zvakanyanya pakuita seyinotungamira yekutengesa zano, uye ndizvo chaizvo. E-commerce inopa chinhu chimwe chete chatisingazomboite muzvitoro: wese online shopper anogona 'kufamba' mune yakatosiyana, kumberi chitoro. Kuzvigadzirira zvigadzirwa kurudziro kune kuravira kweiyo online shopper kuri kuwedzera mukana wevatengi kuwana chimwe chinhu chinobata ziso ravo nekukurumidza. Kugadzira zvaunofarira zvipiro zvinoreva kushandisa dhata kubva kubhurawuza rekutanga kutenga uye pa-saiti chiitiko kufungidzira kuravira kwavo; rimwe basa rave kuwanikwa zvakanyanya kuburikidza nemasimba ehungwaru hwekunyepedzera. Customization ichave mbiru ye post-COVID commerce, ichichinja mamiriro ezvinotarisirwa nevatengi.
Chatbots, CRM dzakabatanidzwa, uye nehungwaru dhata mhinduro dzinogona kubatsira vatengesi vatengesi kubata kwavo e-commerce kudiwa. Iyo yakawedzera data kubva online yekutengesa inogona kugadzira kushambadza kushambadzira, uye mari muAR inoita kunge yakachengeteka bheji. Mukupedzisira, zvisinei, mutengi anogara aine izwi rekupedzisira; post-COVID kupona kunoenderana nevatengesi vanoisa iyo (chaiyo) mutengi kutanga.
Tags: 3d chigadzirwa chinoratidzaaichakagadzirwa njereAugmented realitybhizinesi mukatichatbotsmuchinjiko-chiteshi ruzivomutengi kutangamutengi-centrice-zvokutengeseranaecommercege capitalzviitiko zvakasanganiswainteractive chitoroPersonalizationstatistica
Zain Jaffer ndiye Muvambi uye CEO we Zain Ventures, inzvimbo yekudyara iyo inopa mari pasi rose kumatekiniki kutanga, zvivakwa, uye zvakaenzanirana zvakavanzika. Sa serial muzvinabhizimusi uye muzvinashawo mari, Zain anoshingairira kupa mazano nekudyara muganhu tech kutanga-ups kuyambuka United States.